प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिपी कोइरालाले देशवासीका नाममा दिएको पहिलो सन्देश :: बिपी कोइराला :: Setopati
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिपी कोइरालाले देशवासीका नाममा दिएको पहिलो सन्देश
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिपी कोइरालाले २०१६ जेठ १४ गते देशवासीका नाममा पहिलो सन्देश दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा हामीले बिपीको उक्त सन्देश 'नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेजहरू' किताबबाट साभार गरेका छौं।
देशका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू,
मेरो तपाईंहरू सबैमा अभिनन्दन पुगोस्। बडो विश्वासका साथ श्री ५ महाराजाधिराजबाट मलाई देशको प्रधानमन्त्रीको सम्मानित पदको जिम्मेवारी बक्सेको छ। हालै सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेदारी मेरो काँधमा पर्न आएको छ। यस प्रकार राजा र प्रजा दुवैको विश्वास मलाई प्राप्त हुन सकेकोमा स्वभावतः मलाई अत्यन्त हर्ष, सन्तोष तथा उत्साह प्राप्त भएको छ। मेरो नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डल राजा र प्रजा दुवैको विश्वासको पात्र तथा नयाँ व्यवस्थाको प्रतिक हुन गएको छ।
निर्वाचनको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटीको शुभारम्भमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्थाबाट भएको छ। तसर्थ नेपालले आज एउटा नयाँ अध्यायलाई प्रारम्भ गरिरहेको छ। अनुभव हामी सबैमा भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ आज इतिहासले हामीलाई नियतिको आमनेसामने स्थापित गरेको छ। यो परिवर्तित अवस्था र यसबाट प्राप्त भएका राष्ट्रिय अवसरलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।
श्री ५ महाराजाधिराजको सदिच्छा र मौसूफको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि दृढ आस्थाले गर्दा नेपालको ऐतिहासिक निर्वाचन निष्पक्षतापूर्वक र निर्विघ्न सम्पन्न भएर संसारका सामू प्रजातन्त्रप्रति हाम्रो देश नेपालको विश्वासलाई घोषित गरेको छ।
जनताको सम्पूर्ण सहयोग र आस्था प्रजातन्त्रको मुख्य आधार तथा माध्यम निर्वाचनलाई प्राप्त भएकाले जनताको प्रजातान्त्रिक जागरूकता सन्देहरहित ढंगले प्रदर्शित भएको छ। यसका प्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयत्न अनुचित मात्र होइन, देश र जनताको स्पष्ट भावनाको प्रतिकूल हुनेछ। हाम्रो सबै नरेशको सदिक्षा तथा जनताको संकल्पका प्रति पूर्ण विश्वास राखेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई दृढतर पार्नपट्टि लागौं भन्ने मेरो हार्दिक आह्वान छ।
मलाई प्रधानमन्त्री मनोनित गर्ने अवसरमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट संसदलाई अविलम्ब बोलाउनुपर्छ भन्ने हुकुम बक्सेको थियो। यस शाही इच्छालाई कदर गर्ने हाम्रो संकल्प छ। अहिलेसम्म त्यसतर्फ भएको कार्यको प्रगतिको विचार गर्दा यस सम्बन्धमा चाहिने नियम तथा उपनियमहरू त अबिलम्ब तयार हुने सम्भावना देखिएको छ। तर संसदका लागि भवन उपयुक्त गराउन एक महिना समय लाग्ने भएकाले आषाढको दोस्रो हप्तामा कुनै ऐतिहासिक तिथिमा यो कार्य सम्पन्न गराउने हाम्रो विचार छ।
हाम्रो सरकारको आधार जनताको विश्वास भएकाले र साथै हाम्रो राजनीतिक जीवनको मूलजरो पनि जनतामै पसेर आफ्नो जीवन रस त्यसद्वारा पाइरहने हुनाले हाम्रो समक्ष वचनबद्ध भई उपस्थित गरिसकेको हाम्रो निर्वाचन घोषणा-पत्र हो। सरकारको आर्थिक सामर्थ्यअनुसार त्यसमा उल्लिखित कार्यहरूको सम्पादन हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनेछ।
हामीले आफ्नो कार्यक्रममा प्राथमिकताः १. प्रशासकीय तथा न्यायसम्बन्धी सुधार, २. अल्पकालीन तथा तत्काल परिणाम तथा लाभ ल्याउन सक्ने योजनाहरूलाई विशेष ध्यान दिएर अहिलेसम्म भइरहेको विकास कार्यलाई झन् द्रुत गतिले बढाउने, ३. भूमिसुधार तथा किसानहरूको कल्याण कार्य, ४. लघुउद्योग धन्दाको विस्तार, ५. शिक्षा, ६. स्वास्थ्य, ७. यातायातको विस्तार आदि विषयलाई दिएको छ।
किसानहरू हाम्रो आर्थिक जीवनको मेरूदण्ड हुन्। उनीहरूको कल्याणले नै समाजको कल्याण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस्तो हुनाले स्वभावतः उनीहरूको कल्याणपट्टि हाम्रो सरकारको सर्वप्रथम ध्यान जानेछ। विदेशबाट प्राप्त हुने सहायताको दुरूपयोग हुन नदिई देशलाई अधिक से अधिक लाभ हुने गरी यसको संगठनपट्टि हाम्रो सरकारको ध्यान जानेछ।
पछिल्ला सरकारहरूद्वारा पनि समय-समयमा योजना प्रारम्भ गरिएका राम्रा कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने पनि हाम्रो इरादा छ। पहिले उठान गरिएका उत्थान कार्यलाई अगाडि बढाउनुका साथै नयाँ कार्यहरूको शिलान्यास सरकारले गर्नेछ। सरकारले समय समयमा आफ्नो कार्यक्रम प्रकाशित गरिरहने छ। संसदको बैठक बस्न थालेपछि उसका समक्ष विचारार्थ आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्नेछ। विकास कार्यलाई स्थानीय जनताको सहयोग लिई उपयुक्त स्थानीय संगठनको माध्यमबाट गराउने प्रयत्न हामीले गर्नेछौं।
यस सम्बन्धमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। निर्माण कार्यका लागि चाहना मात्र यथेष्ट हुँदैन। यसका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो यावत् प्रश्न राष्ट्रलाई अर्पित गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ। आजको अवसरमा जहाँ म तपाईंहरूलाई सरकारले गर्न चाहेका कुराहरू उल्लेख गर्छु, त्यहाँ तपाईंहरूलाई पनि आराम नगरिकन देशको सम्पत्ति वृद्धिमा सचेष्ट रहनुपर्छ भन्ने अपिल गर्छु।
शिक्षामाथि विशेष ध्यान हाम्रो सरकारको रहने भएकाले स्वतः विद्यार्थीहरूको जीवनमा नयाँ स्फूर्तिको प्रेरणा आउने छ भन्ने मलाई लागेको छ। शिक्षालयको अवस्था सन्तोषजनक नभएको हुनाले विद्यार्थीको जीवनमा एकप्रकारको बेचैनी छ। यसलाई हटाएर उपयुक्त वातावरणमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले विद्याअध्ययन गर्न पाउनेछन्। युवकहरूको उत्साह र आदर्श भावनालाई कुण्ठित हुन नदिई देशको मंगलमय भविष्यप्रति उत्तरदायित्वको भावना जागृत गराउने प्रयत्न सरकारले गर्नेछ।
देशका विभिन्न वर्ग, बुद्धिजीवि, शिक्षक, मजदुर, व्यापारी, महिला आदिले आफ्नो आफ्नो विकासको अवसर प्रजातन्त्रमा झन् बढी मात्रामा पाउने छन्। प्रजातन्त्रले सबैको विकासको बाटोलाई प्रशस्त गर्नेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न जिम्मेदारी हामीहरूको भएको छ।
सरकारी कर्मचारीले जंगी या निजामति जुनसुकै ओहोदामा भए पनि नयाँ युग, जसको प्रादुर्भाव हालै सम्पन्न भएको निर्वाचनले गरेको छ। त्यसअनुसार आफूलाई जनताको सेवक भन्ठान्नुपर्छ। प्रशासकीय यन्त्र कल्याणकारी राजनीतिक त्यसको निर्माण गर्ने सरकारी माध्यम हो। तसर्थ सरकारी कर्मचारीहरूको ठूलो जिम्मेदारी छ। उहाँहरूबाट देशको भलो हुने ठूलो यन्त्रचलित भइरहेछ।
यो यन्त्रलाई भ्रष्ट हुन नदिनु पनि उहाँहरूकै पवित्र अभिभारा छ। हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने अठोट गरेको छ। यस कार्यमा कर्मचारीहरूको उत्साहपूर्ण सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रशासकीय सुधारद्वारा सरकारले कर्मचारीहरूको इमान्दारीको कदर गर्न र आफ्नो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वप्रति सदा सजग रहने प्रेरणा प्रदान गर्ने हाम्रो सरकारको इरादा छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको इज्जत तथा आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने अभिभारा पनि सरकारले लिनेछ। शाही सेना, जो नेपाल जातिको एउटा गौरवको विषय छ जसले हाम्रो देशको मर्यादा राख्ने र आफ्नो परम्परालाई नबिर्सी नयाँ उत्तरदायित्वलाई ससम्मान पूरा गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। शाही सेनाबाट तयार तथा हालै श्री ५ महाराजाधिराजबाट उद्घाटन भएको कान्ति राजपथ देश विकास कार्यमा शाही सेनाको प्रयत्नको एउटा सुन्दर नमूना भएको छ।
यसले नेपली हृदयमा उत्साह भरेको छ। आजको दिन म जंगी निजामति पुलिस प्रवृति यावत् कर्मचारीहरूलाई सम्झेर उहाँहरूले दलगत राजनीतिबाट तटस्थ रही श्री ५ को सरकारप्रति सम्पूर्ण बफादार रही सरकारी नीतिलाई कार्यान्वित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाउन चाहन्छु।
नेपाल विस्तार विस्तार मित्रताका सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रहरूसँग बढाउँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिलेको नेपाल अहिले छैन। भारतसँको ऐतिहासिक तथा अविच्छिन्न मित्रता झन् घनिष्ट भइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी देश चीनसँग हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएर हामी आफ्नो यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई झन् झन् बलियो पारिरहेछौं।
रूसद्धारा नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापित गर्न हामीले स्वागत गरेका छौं र अब छिट्टै रूसी दूतावास काठमाडौंमा स्थापित हुनेछ। यस प्रकार अरू मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि स्वागत गर्ने अरू अरू मौका हामीले पाउनेछौं। संयुक्त राष्ट्रमा हाम्रो सदस्यता भएकाले हाम्रो देशले आफ्नो राष्ट्रिय आदर्शअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएको छ।
हाम्रो सरकारले यो सदस्यताको सदुपयोग विश्व शान्ति र हाम्रो राष्ट्रिय नीति तटस्थताको स्वतन्त्र नीतिको पक्षमा गर्नेछ। नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले तटस्थताको नीति अनुसरण गरेको कुरा मैले दोहोऱ्याएर भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाल कुनै पनि सामरिक गुटमा लाग्ने छैन।
म आठ वर्षपछि पुनः तपाईंहरूको बीच सरकारी पदमा रहेर काम गर्न आइरहेको छु। त्यो आठ वर्ष पहिलेको अवसर नयाँ जमानालाई ल्याउनका लागि एउटा द्वार उद्घाटन समारोह जस्तो थियो। त्यो अनियन्त्रित उत्साहको अवसर आज आठ वर्षपछि पुनः उपस्थित भएको छु।
आजको जिम्मेदारी निर्माणको जिम्मेदारी छ। संगठनको जिम्मेदारी छ। आज केवल उत्साह मात्र अपेक्षित छैन। आज चाहिएको छ त्यस्तो राष्ट्रिय संगठन जसद्वारा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा समाजको कल्याणकारी कार्यको सम्पादन हुन सकोस्।
प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्न वा देशको विकास कार्यलाई सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व सबैको काँधमा छ। देशलाई अगाडि बढाउन सबैको सहयोग हामीलाई अपेक्षित छ। प्रजातन्त्रमा विरोधीको पनि असाधारण महत्व छ। नत्र भने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी हुने भय हुन्छ।
विरोधी तत्वहरूलाई पनि उनीहरूबाट अनुत्तरदायित्वपूर्ण काम हुन गएमा देशलाई उत्तिकै घात पर्छ, जति सरकारको अनुत्तरदायी कार्यले। तसर्थ म सबैको सहयोगको लागि आज हृदयदेखि अपिल गर्छु देश सबैको साझा हो। नेपालको उज्ज्वल भविष्य हामी सबैको सामूहिक आशा हो।
नियतिले हामीलाई निर्माण, उत्थान र गौरवको मार्गमा अग्रसरता हुन आह्वान गरिरहेको छ। के आजको ऐतिहासिक क्षणमा आफ्नो स्वार्थ, संकीर्णता तथा दुर्बलतालाई त्यागेर नियतिको वाणीलाई सुन्न सक्दैनौं? यति भनेर सबैमा पुनः अभिनन्दन पुन्याएर तपाइँहरूसँग अहिले विदा हुन्छु।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८, ०७:१७:००